Sweet zingaba wusizo! Futhi labo abalungiselela kumelwe banakekele ke. Ukhilimu omuncu ubisi olujiyile - lena enye esihle kakhulu kunoma yimuphi nezinye ukhilimu. Uma ingane ungadla Ubisi olujiyile, ukhilimu omuncu futhi akathandi, bese wenza ikhekhe nge ukhilimu, uqiniseka ukumjabulisa! Ngaphezu kwalokho, ilula ngokwanele. Futhi okukhona ngisho amazwi engadingekile akuyona ewundabuzekwayo.
Ukhilimu omuncu ubisi olujiyile
Indlela elula kuhlanganisa izithako eziyisisekelo kuphela. Ukuze wenze lokhu, thatha cream (800 g), okungcono ezingeqile kwezingama-30% fat, futhi ukulishiya izingqimba eziningana cheesecloth ngobusuku obubodwa, uhlanganyela phezu umthamo. Ngakho nge abakhwabanisi wakhe wonke umswakama ezingadingekile. Ikakhulukazi isigaba wokulungiselela enjalo iyadingeka lapho ukhilimu ukuthenga, owabekwa engekho ekhaya.
olujiyile ubisi imbiza ibekwe epanini yamanzi. Udinga amanzi kakhulu, ukuze lonke usebe wangena shí kulo. Bilisa futhi abilisiwe imizuzu engu-40. Phakathi nalesi sikhathi, ubisi wafingqa okuphekiwe umbala yayo iba caramel.
Balandela isiswebhu ukhilimu ubisi olujiyile. Kungcono ukukwenza nge mixer. Ukhilimu omuncu ubisi olujiyile ulungile!
Ukhilimu omuncu ne gelatin (1)
Lokhu ukhilimu kadokotela kufanele uzilungiselele ngokushesha ngaphambi ukusetshenziswa.
Gelatin (2 amathisipuni) kuthiwa batheleka isigamu ingilazi yamanzi futhi bavunyelwe ukuba ume imizuzu 20-30. Ngemva kwalokho, it is ziyoncibilika a okugeza amanzi, kodwa hhayi alethwe ketshezi abilayo.
Whip ukhilimu kuze kube isikhathi lize ngeke ukwandisa inani okungenani izikhathi 2. Ngokulandelayo, ngokuqhubeka uphehle, engeza 1 inkomishi kashukela, kwengcosana kashukela vanilla. Uma i-mass kuyinto bushelelezi, it is wathela ekusakazeni ezondile gelatin uhlanganise kahle.
Ukhilimu omuncu ne gelatin (2)
Leresiphi ngisho kulula, kodwa akukho okumnandi kancane.
Cream (1 inkomishi) ngesiswebhu njengoba kule iresiphi odlule, ushukela oluyimpuphu yengezwe ngo isamba 4 wezipuni.
Gelatin (1 isipuni) batheleka amanzi (4 izinkomishi), washiya ukuma isikhashana, khona-ke evuthayo, Ukuqedwa ngokugcwele gelatin, futhi ukusakaza mncane ngenkathi sifudumele (cishe 40 ° C) elachithwa zibe mass eyinhloko ukhilimu.
Ngenxa yalesi iresiphi, awukwazi ukuthatha amanzi nobisi ku esilinganayo.
Cottage shizi no ukhilimu omuncu (1)
250 g ophehliwe izaqheqhe ushukela (150 g). Ingezwe 400 g ukhilimu futhi kahle edidayo.
Cottage shizi no ukhilimu omuncu (2)
200 amagremu cottage shizi kudingeke axhumane ne 1 iphakethe vanilla 1 inkomishi ushukela. Khona-ke wanezela ukhilimu pint futhi mass elixutshwe kahle ukuthola ukhilimu ngokwanele aminyene futhi eyohlobo.
Cottage shizi no ukhilimu omuncu (3)
Gelatin (10 g) wasala ngamanzi abandayo (ikota inkomishi) imizuzu engu-15. Khona-ke ukufuthelana futhi, ibangele, yahlakazeka. Akunakwenzeka ukuba alethe ingxube kuze Reflux.
250 amagremu cottage shizi yashaywa izinkomishi isigamu ushukela, engeza 250 amagremu ukhilimu omuncu futhi zonke ngesiswebhu kahle.
Gelatin kancane ukungezwa mass futhi edidayo.
Imfihlo eyinhloko esiphundu ukhilimu omuncu - kuhle yenza ukhilimu. Ukuze wenze lokhu, kudingeka selehlile. Desirably, inqubo kanye lokushisa ongaphakeme inakekelwa, isibonelo, ukuthengisela isitsha ukhilimu in a deep, bagcwala amanzi abandayo. Enza phehla kungenzeka kanye Usebenzisa mixer kagesi, blender noma ukudla processor.
Kulabo othanda ukuba ulinge, ungazama ukuze ungeze ku ukhilimu omuncu ubisi olujiyile (noma yikuphi kokungaphezulu) amaconsi ambalwa kalamula, vanilla, orange elikhuhluziwe noma ijusi, usinamoni ogayiwe, utshwala, utshwala noma brandy.
Uma ungeze kuya ushizi ukhilimu, khona-ke kumelwe nakanjani babe nesibindi futhi grinded. Lokhu kungasetshenziswa, isibonelo, ziye ngapha nangapha ngesisefo. Ukhilimu omuncu kufanele kube oily. Kwezinye zokupheka kuvunyelwe okuqukethwe amanoni 20%, kodwa, ngokuvamile, kufanele bube ngaphezu kuka-30%.
Uma kukhona isifiso kunoma iyiphi ukhilimu ungakwazi ukwengeza ukhilimu. Baphehla ukhilimu omuncu nisondele le nqubo iyafana ekubhaxabulweni ukhilimu. Kumele kube abandayo, kungenjalo kodwa akwenzeki lutho.
Sifisela wena amaswidi okumnandi kanye ukhilimu ezinhle!
Silungiselela isaladi ne isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi petioles
Yini okufanele ibe ukudla ngesikhathi uncelisa?
Indlela yokwenza isobho e "Maynkraft" - Feel like umpheki!